Home Wararka Farmaajo oo markale bahdilay Kenya & hogaankeeda! Ileen doqani dibar kama dharagto!
Farmaajo oo markale bahdilay Kenya & hogaankeeda! Ileen doqani dibar kama dharagto!
Dowlada Kenya ayaa heshiis gaara oo qarsoon la gashay RW Rooble, kaas oo lagu heshiiyay in Wasiirka Arimaha Dibadda ee Kenya Marwa Raychelle Omamo ay booqasho qaraoodi ah ku timaado dalka Soomaaliya.
Heshiiskaan ayaa ahaa mid laga qariyay hogaanka dalka intiisa kale, gaar ahaan golaha Wasiiradda iyo Kusimaha madaxweynaha Farmaajo.
Ujeedada safarka ayaa lagu sheegay in uu ahaa in dib looga noqdo dacwada badda ee u dhaxeeysay labada dal iyo in qaadka dib loogu furo dalka Kenya. Waxaa yaab leh in dalka Kenya ay ku soo fashilmeen talaabo kastaa oo ay u qaadaan dhanka Soomaaliya, ayaa hadana ay hayaan Wadadii fashilka.
Waxa ay dad badan la yaaban yihiin caqli ah in Kenya heshiis la gali karto RW Xil gaarsiis ah halka ay albaabka ka xiranayaan madaxweyne ku meel gaar ah..
“Nin ceyrin waayay agaasime hay’adeed, (Rooble) ayaa Kenya waxa ay rajo ka qabtaa in ay heshiis masiiri ah uu la gali karo dal shisheeye, adeer Maxaa ka qaldan Kenya”, sidaas waxaa yiri mid kamida Xildhibaanada baarlamaankii 10naad.
Waxa uu intaas ku daray “Markastaa uu Farmaajo siyaasad ahaan dhinto waxaa dib u soo noolaysa siyaasad xumida iyo fashilka Kenya, war dalkaa Kenya yaa xukuma”
Qoraalka uu caawa soo saaray Farmaajo ayaa ku cadeeyay in RW Rooble yahay dhaqsi aan go’aan ka gaari arimaha masiiriga ah! Hadaba Maxaa u tala ah Kenya? Wasirada ma ku adkeeysanaysaa safarkeeda.
Dhanka kale, RW Rooble siyaasiyiinta ka soo jeeda Beesha Sacad ee uu talada ka qaadanayo, waa kuwo horay ugu soo fashimay mas’uuliyadiihii horay loogu igmaday, waxaana talo ugu jirtaa in uu ka haro kuwa nocaas ah.